संसदीय दलमा बहुमत देखाईदिने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी, सांसदहरुको हस्ताक्षर तयार ! – NawalpurTimes.com
संसदीय दलमा बहुमत देखाईदिने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी, सांसदहरुको हस्ताक्षर तयार !
प्रकाशित : २०७७ वैशाख १७ गते १३:४१
काठमाडौं, १७ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट हटाउने तयारी भैरहेका समाचार आईरहँदा ओली भने संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत देखाउने कसरमा जुटेका छन् । अध्यादेश प्रकरणले ओलीमाथि आफ्नै पार्टीका अन्य नेताहरुको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा दिन दबाब सिर्जना गरेपछि नेकपाभित्रको कलह उत्कर्षमा पुगेको छ । यो बीचमा ओलीले विवाद मिलाउनको लािग प्रयासपनि गरेका थिए । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बरिष्ठ नेताद्धय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनैपनि हालतमा ओलीको प्रस्ताव नमानेपछि विवाद झनै बढेको हो ।